Vaovao - Izahay dia matoky ny indostrian'ny tata-taratasy amin'ny ho avy
Izahay dia feno fahatokisana amin'ny indostrian'ny tata-taratasy amin'ny ho avy
Tamin'ny faran'ny tsenan'ny International Stationery and Gifts (Ningbo Stationery Fair) faha-17 tamin'ny volana jolay tamin'ity taona ity dia hitantsika fa foara lehibe voalohany eto amin'izao tontolo izao nanomboka ny fiparitahan'ny valanaretina, dia mbola tonga hatrany ny angon-drakitra fampirantiana isan-karazany avo vaovao. Mandritra izany fotoana izany dia nanapaka ny fetran'ny fotoana sy ny habaka ny hetsika, ary ireo orinasa vahiny amin'ny toerana maro eran'izao tontolo izao dia tsy nandao ny "rahona" an-tranony mba hifampiraharaha amin'ireo mpampiranty. Andao hofenoina fampahalalana momba ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fitaovam-pitaterana amin'ny ho avy.
Rehefa nanomboka indray ny festival isan-taona taorian'ny fisian'ilay valan'aretina, dia nahatratra ambaratonga avo lenta ny fampirantiana ary nametraka firaketana vaovao ho an'ny indostrian'ny fitaovam-pitaterana any amin'ny faritra Azia-Pasifika. Tao anatin'ny 35000 metatra toradroa misy efitrano fampirantiana dimy, orinasa 1107 iray handray anjara amin'ny fampirantiana, dia nanangana trano bongo 1 288, mpitsidika 19 498.
Ireo mpampiranty dia avy amin'ny faritany 18 sy tanàna toa an'i Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Shanghai, Shandong ary Anhui, ary orinasa avy any Wenzhou, Duan, Jinhua ary faritra dimy mpamokatra entana lehibe indrindra ao amin'ny faritanin'i Zhejiang no nandray anjara tamin'ny fampirantiana. Ningbo orinasa dia nahitana 21% tamin'ny totaliny. Any amin'ny faritra yiwu, Qingyuan, Tonglu, Ninghai ary ireo faritra mampiavaka ny famokarana fitaovam-pitaterana hafa, ny governemanta eo an-toerana dia handray ny andraikitra amin'ny fandaminana sy fanentanana ireo orinasa ao amin'ny faritra iadidiany handray anjara amin'ny fampiratiana amin'ny vondrona.
Ny fampirantiana dia nitondra vokatra vaovao an'aliny, manarona birao birao, fitaovana fanoratana, kojakojam-kanto, kojakoja ho an'ny mpianatra, kojakoja amin'ny birao, fanomezana, famokarana fitaovana ary fitaovana fanodinana ary ampahany, misy ny sokajy rehetra amin'ny indostrian'ny fametaka sy ny gadona indostrialy ambony sy ambany.
Noho ny fiantraikan'ny valanaretina, dia niara-nanatrika ny fampirantiana ny ankamaroan'ny faritra lehibe. Amin'ity fampirantiana ity dia ity, ankoatry ny vondrona Ninghai, Cixi, Wenzhou, Yiwu, Fenshui ary Wuyi, ny Biraon'ny Varotra Qingyuan ary ny Fikambanan'ny Indostrian'ny Pencil Qingyuan dia nikarakara orinasa lehibe 25 toa ny Hongxing, Jiuling, Meimei ary Qianyi handray anjara amin'ny fampirantiana. sambany. Ny tanànan'i Tonglu Fenshui, fantatra amin'ny anarana hoe "ny tanànan'ny fanaovana penina sinoa", orinasa mpamokatra fanomezana lehibe indrindra "Tiantuan" dia nipoitra ihany koa tamin'ity fampirantiana ity, mba hampitana ny tanjon'ny marika hoe "avelao ny penina isaky ny olona".
Ny indostrian'ny fampirantiana an-tsoratra Ningbo koa no voalohany amin'ny "rahona". Ny efitrano fampirantiana kianja dia natsangana tao amin'ny tranombakoka mba hanaovana lalao filokana amin'ny Internet. Mpampiranty marobe no mivory ao anaty rahona, ary misy mpikirakira sasany mitady fomba vaovao amin'ny alàlan'ny “fandefasana mivantana” sy “rahona miaraka amin'ny entana”. Ningbo Stationery fampirantiana dia nanangana tsipika tambajotra manokana sy efitrano fihaonamben'ny horonantsary Zoom hahatsapa ny fifandraisana mivantana eo amin'ny mpividy any ivelany sy ny orinasa anatiny. Ny angon-drakitra voaangona teny an-toerana dia mampiseho fa 239 ny mpividy any ampitan-dranomasina avy amin'ny firenena 44 sy faritra eto amin'izao tontolo izao dia hanao docking video amin'ireo mpamatsy mpandray anjara amin'ny 2007.